Kwinqaku ethi "Kusuka kwintoni onokwenza imiski entanyeni" siya kukuxelela malunga nemilinganiselo yamaski entanyeni. I-mask iyona mveliso yokunakekelwa yesikhumba efikelelekayo kwaye elula. Iimaski zivela kwiintsholongwane zemifuno yezokwelapha, ukusuka kwimifuno, kwimifuno neziqhamo. Kodwa bonke baneenjongo zabo zokuphucula ukondla kwesikhumba nokwandisa ukujikeleza kwegazi. Ezinye iimaski, ngaphandle kwesondlo, unobumba, ukuhlanjululwa nokuphucula. Xa i-mask isetyenziswe entanyeni, iingalo zihamba ukusuka phezulu, ukusuka kwisiseko entanyeni ukuya entloko. Naluphi na umaski entanyeni yentamo, ubuso, izandla kufuneka zisetyenziswe kuphela kwilusu elihlambulukileyo. Xa ukhangele ubuso, akufanele uyilibale ngentamo. Ukunyamekela kwakhe kufuneka uqaphele kwaye igqibe. Iimaski entanyeni zingalungiswa ekhaya.
Indlela ekhawulezileyo kukunyunyuza amajikijolo amnandi kwaye usebenzise kwesikhumba sentamo. Unokongeza ukhilimu omuncu kule khowa. Ngentanyeni ungafaka iincatato, ikhukhamba kunye ne-lemon. Ukukhawuleza ukunyusa ulusu entanyeni, ungongeza ioli yomnquma okanye i-glycerin kwimaski.
Ukuphucula ukondla kwesikhumba entanyeni, kufuneka usebenzise imaski eninzi. Umaski wokunyamekela intamo uza kwenza njalo: uthathe iispuni ezimbini zeeyusi uze uzixube kunye namaqanda amaqanda ama-2, kule mxube, faka i-glycerin encinane kunye ne-1 teaspoon ibhotela. Sifaka le maskki kwilinen ecocekileyo eyomileyo kwaye siyifake entanyeni yethu, ukusuka phezulu siyilungisa nge-bandage. Sigcina imaski malunga nemizuzu engama-25 okanye engama-30, uze uhlambe ngamanzi afudumele kwaye usebenzise ukhilimu otyayo obusondeza entanyeni.
Ukunyamekela isikhumba esikhulile entanyeni, sebenzisa imaski eyenziwe kwi-1 ithispoon yeoli yemifuno kunye neepunipoyi ezi-2 ze-cottage shiese. Sibeka lo mxube kwi-gauze, kunye ne-pribintuem entanyeni. Sigcina le maski esikhumbeni imizuzu engama-40.
Iimaski, ezibandakanya i-glycerin, i-moisturize, ityholise isikhumba sentamo kwaye incedo kakhulu. Emva kwakho konke, ulusu entanyeni kunye nolusu lwezandla lunikeza ubuncinci beli bhinqa. Ngoko ke, kwiindawo ezinjalo zomzimba kufuneka ubonise unyameko kunye nokuqwalaselwa okhethekileyo. Udinga ukunyamekela isikhumba sakho ngokuchanekileyo. Yaye ukuba intanyeni ingayilungiswanga kakuhle, isikhumba silahlekelwa ukuqina kunye nokunyaniseka kwayo, imibimbi ivela kuyo.
Kodwa kulula ukukhusela kunokugqithisa ezi mpazamo. Emva koko, intamo yomntu idala ngaphambili kunomntu. Emva kweminyaka engama-30, ulusu ludinga ukunakekelwa kwaye konke kuxhomekeke kuthi. Musa ukuvila, uzikhathalele, kuba umfazi ongenandaba nentamo yakhe, ubonakala ekhulile kuneminyaka yabo.
Ukucoca iimaski entanyeni
Hlanganisa i-1 teaspoon yeoyile yemifuno, i-juice ½ i-orange kunye neepunipoon ezi-2 ezinamafutha e-cottage cheese. Umxube ugxininiswe kwi-gauze ephindwe kabini, esiyifumana ngayo imizuzu eyi-15 okanye engama-20. Emva kokususa i-mask, geza intamo ngamanzi afudumele. Ngesikhumba esikhulile entanyeni, le maski iyenziwa kabini ngeveki.
Ubilise kwiifomati ezifanayo 2, i-razmone. Kuzo iizambane ezitshisayo zitshatileyo zongeza 1 ithispoon ye-glycerin kunye ne-1 teaspoon yeoli yeoli. Siza kubeka lo mxube kwi-gauze kwaye sisebenze entanyeni, ukusuka phezulu siza kuguqa nge-napkin egciniweyo, esiya kuyenza kuqala. Emva kwemizuzu engama-15 okanye engama-20, sisusa i-compress, supha intamo ngamanzi afudumeleyo, thabatha ukunyuka kwe-lime (egqoke ingilazi yamanzi abilayo 1 okanye i-2 tablespoons zeentyantyambo, esizifumana imizuzu eyi-10 okanye imizuzu engama-15, uze usihluze), uze usebenzise imizuzu engama-30 okanye engama-40 i-cream cream .
I-cream, ukugcina u-elasticity yolusu entanyeni
Thatha iindawo ezine zeoli ye-peach kunye ne-1 ye-lanolin. I-khilimu isetyenziswe kwesikhumba seendawo ezisemgangathweni kunye zangaphambili entanyeni. Siyixabisa ngomnye kwaye emva kwesinye icala, sithatha intamo phantsi kwesangqa kwaye slayidi, ukunyakaza okumnene, sithatha ukususela phezulu ukuya phezulu kuma-10 okanye amaxesha angama-15. Emva koko intamo ibethwa ngamanyathelo emizuzu emi-3 okanye emihlanu. Umqolo ongasemva kwentamo uhluthwa yi-circular motions yesandla ngasinye okanye amaxesha ama-10.
Hlanganisa i-15 ml ye-camphor utywala okanye u-15 ml we-Vaseline, i-1 teaspoon infusion ye-chamomile, i-2 teaspoons ye-oyile yemifuno, i-1 ithispoon ye-honey, i-yolk 1. I-khilimu isetyenziswe kwesikhumba emva kokuncincizela.
Iipunipo ze-2 zembewu yeeflekisi zixutywe kunye neziglasi ezi-2 zamanzi kwaye zipheke kuze kube yimeko ye-mushy, igcobe isifuba, intamo, igubungele ngephepha lesiphatho kunye nephezulu ngentsimbi ye-terry. Emva kokususa i-mask, ulusu luya kufefa ngamanzi abandayo kwaye lufakwe ngekhilimu. Le maski iya kwenza ulusu lwentamo luthwele kwaye lugqibe.
Amazambane ahlambulukileyo axutywe kunye nepunipoon yesoyile yemifuno okanye ngeqanda elibethiwe, silifaka ngohlobo olushushu entanyeni, sifaka ikhapu yekotoni phezulu. Emva kwemizuzu engama-20, hlamba imaski ngamanzi afudumeleyo.
Ijusi le lemon
1. Ukugcina i-elasticity kunye ne-elasticity yesikhumba, kanye kanye ngeveki, siyihlambe isifuba, amahlombe nentamo kunye nesisombululo sejusi se-lemon kwi-0.5 ilitha amanzi. Emva koko isikhumba somile kwaye sisondeza ukhilimu.
Emva kokuhlamba amahlombe akho nentamo, supha ngamanzi ngejisi lemon (2 ilitha amanzi - 1 ithispoon ye juice).
Iimbumba ze-egg ezixutywe ngesiglasi seglasi ye-ukhilimu omuncu, engeza ijusi yesiqingatha se-orange kunye ne-¼ isipuni se-vodka. Sinyakaza uboya bekoton kwi-lotion, bhinqa intamo, uze usebenzise i-oli efudumele yemifuno okanye i-cream cream. Ukucoca okunjalo kuya kukhusela intamo kwi-sagging and wrinkles kwaye ukhusele ukuguga kwangaphambili kwesikhumba.
Thatha iipunipoyi ezi-2 ze-kottage ushizi exutywe ne-1 teaspoon ye-boric acid eyomileyo, isipuni se-1 sesitashi, i-1punipoon ye-oyile yemifuno, i-2 tablespoons ye-ukhilimu omuncu. Siza kufaka umxube entanyeni kunye nobuso, ukusuka phezulu siza kuhlanganisa kunye ne-napkin kwaye siza kubamba imizuzu engama-20, ngoko siza kuhlamba.
Ukucoca imaski yobusi
Hlanganisa i-1 ithispoon yobusi obufudumele okanye ama-droplethi ama-5-6 e-lemon, 1 ithispoon yeoli yezilwanyana. Sifaka isikhumba esihlambulukileyo sentamo size sijongane nemaski kwaye emva kwemizuzu engamashumi amabini siya kuhlamba ngamanzi afudumeleyo, kwaye emva kwamanzi apholileyo.
Masisebenzise amazambane ashushu, yongeza i-yolk yeqanda kunye neepunipoyi ezi-2 zobisi obushushu. Ukufudumala umxube ubeke entanyeni nobuso, gubungela ithawula. Sinemizuzu engama-20, ngoko sihlamba, kwaye emva kwamanzi abandayo.
Ukucoca iimaski entanyeni, ukucoca kunye nobuso, ukukhuthaza ukuhlaziywa, ukuhlaziywa kwesikhumba, ukunciphisa ukukhathala, ukunciphisa, ukuphucula ukondla, ukuvuselela ukujikeleza kwegazi. Kodwa ukongeza kwiimaski kufuneka zihlale zinyamekela ulusu, imaski yinkonzo yokongeza ukunakekelwa kwesikhumba.
Imiski yezokwelapha entanyeni
Ukunyanzeliswa kumhluzi womhlaza
Ukuba isikhumba esomayo sentamo, ke ubanda kwaye ushushu uxinzelele amaxesha ama-2 ngeliveki, qalisa kwaye uqede nge-compress frost. Ukuncinciza okutshisayo kwenziwa kwintsimbi okanye i-sage infusion. Ukuze ulungise umhluzi, thabatha iipunipoli ezi-2 zamagqabi omileyo, uthele iiglasi ezi-2 zamanzi, ubilise imizuzu emi-5 okanye-10 ngokushisa okuphantsi, uze upholise uze ufake i-compress entanyeni.
Ukuba ulusu lentanyeni lunomthunzi omnyama kunesikhumba ebusweni, ngoko ngaphambi kokuba siwusebenzise nge-cream edlayo, siya kutywala intamo ngeetatu zetamatato.
Ukuphelisa i-chamomile entanyeni
Siza kwenza i-compress, ngenxa yoko sithatha i-chamomile inflorescences kunye ne-weld kwi-250 ml yobisi. Ukufudumala umxube ngendwangu elukhuni kwaye uguqe entanyeni. Sifaka ifilimu kunye nethawuni ye-terry phezulu kwaye sibambe imizuzu eyi-15. Emva kwentamo ye-compress asiyi kuhlamba, kodwa sula nje ithawula uze usebenzise ukhilimu. Uncedisa ngesikhumba esiluliweyo.
Amaski ezenziwe ngeoli ye-peach
Thatha ibhotile yeoli ye-peach, uyibeke emanzini atshisayo kwaye uyitshise kwindawo yokuhlambela ngamanzi ukuya kuma-degrees ama-37. Faka isicelo entanyeni, phezulu entanyeni esiyigubungela ngephepha lesikhumba, kwaye ukuze sigcine ukushisa, siya kulufaka ngehawula. Susa kwiminyaka engama-20 i-compress, kwaye isikhumba siya kusula nge-cotton swab.
- Gweba ikhukhamba entanyeni, uyifake ingcezu yengubo kwaye emva kwemizuzu eyi-10 siya kususa. Ulusu emva kweso siki luya kuba lucala kwaye lutsha.
- Ukuba ulusu entanyeni lunombala obumnyama kunobuso, ngaphambi kokuba siwuthambise ngeoli yemifuno okanye ukhilimu onomsoco, susula intamo nge-cotton swab edibene kwijikisi.
Ngesikhumba esikhathekayo entanyeni, yenza umxube ophazamisayo, qalisa ngokubanda uze uqede nge-compress frost. Ukunyanzeliswa okufudumele kumiselwe imizuzu engama-1 okanye emi-2, kubanda ukufaka imizuzu emi-5. I-compress ehambayo yenziwe kwintsimbi yangempela.
Iimaski ezivela kwimizi yelamula
- Ukuba ulusu entanyeni lumnyama ngaphezu kwesikhumba ebusweni, ngoko ngaphambi kokusebenzisa ukhilimu, siya kusula i-discton disc, eyayisixutywe nge juisi.
- Kwi-flabby, engenakucaluleka, isikhumba esikhankanywe entanyeni, umxube weprotheni ehlanjulweyo, i-juice ye-lemon enye, i-1puni ye-oyile yemifuno iya kusebenza kakuhle. Umxube obangelwayo ugcoba intamo, ngaphambi kokulala.
Imaski eyenziwe ngeflekisi
Uya kwenza ulusu lube luthando kwaye lubushelele. Ngamazambane ahlambulukileyo ukusuka kumhluzi we-flaxseed siza kugcoba isifuba nentamo, sivale ngephepha lesikhumba kunye ne-top nge-tile. Emva kokususa i-mask, ulusu luya kufefa ngamanzi abandayo kwaye lufakwe ngekhilimu.
Masks ezivela kwiitatata
- Kanye kunye nokusetyenziswa kweebatates ezifuthiweyo entanyeni nasebusweni, sebenzisa i-peel ecocekileyo yamazambane okanye iiqatatese entanyeni. Ulusu luya kubhathaka, imibimbi iya kukhishwa.
- Iifomati ezifihliweyo zixutywe ngeqanda elibetywe okanye nge-oyileji yeoyiyo yemifuno. Siza kufaka entanyeni, ukusuka phezulu siya kufaka i-napkin napkin.
Masks ezenziwe kwi-orange
- Xa sinyamekela isikhumba esikhathekayo entanyeni, siza kwenza i-mask ye-orange, ngenxa yoko sithatha iipunipoyi ezi-2 ze-fatty cottage cheese, xuba ne-1 ithispoon ye-oyile yemifuno kunye nejusi yesiqingatha se-orange. Umxube ugxininiswe kwi-gauze ephindwe kabini, esiyithintelayo entanyeni imizuzu eyi-15 okanye engama-20. Emva kokususa i-mask, sihlamba intamo ngamanzi afudumele. Senza oku maskki kabini ngeveki. Le maski inefuthe lokuvuselela kwaye lihlaziya ulusu entanyeni.
- Siza kugaya i-orange kwaye siza kufaka i-mush efunyenwe entanyeni, ebusweni nakubuso. Emva kwemizuzu engama-15, hlamba imaski ngamanzi abilisiwe, kwaye usebenzise ukhilimu kwesikhumba. Ukuba ulusu lunama-pores awandisiweyo, i-oily, yongeza iprotheni ehlanjululwe kwi-orange. I-mask i-vitaminizes, inondla kwaye ivuselele isikhumba.
- Siphula ibhanana kwaye sixube ne-1 isipuni se-ukhilimu, i-yolki enye kunye nezipuni ezi-2 ze-kottage cheese. Lo bunzima buya kusetyenziswa kwendawo ye-décolleté kunye nentamo yentamo kwisigamu seyure, kwaye ke siya kuhlamba ngamanzi afudumele.
- Siphula ibhanana elivuthiweyo kwaye songeza amaconsi ambalwa eoli ye-almond. Zonke ezixutywe kakuhle kwaye zibeke entanyeni ehlambulukileyo yentamo, zisuka ngentla siyibophe ithawula ehlanjululwe ngamanzi ashushu. Shiya imaski imizuzu engama-30, uze uhlambe ngamanzi afudumele.
Apple masks entanyeni
- I-apple ye-aple yesilinganiso kwi-grater, xuba kunye nepunipoon ye-oyile yemifuno. I-mask isetyenziswe kwesikhumba sentamo emininzi imizuzu eyi-15 okanye engama-20. I-mask igqibe kakuhle i-vitaminise kwaye iyanciphisa isikhumba.
- Bhaka kwi-aple encinane ye-oven, susa isikhumba kwi-apple uze ususe imbewu. I-pulp esele iya kuhlanjululwa kunye ne-½ ithisipuni yesoyile yemifuno kunye ne-teaspoon yobusi. I-mask iya kusetyenziswa kwesikhumba sentamo emininzi imizuzu eyi-15 okanye engama-20, ngoko iya kuhlamba ngamanzi afudumele.
Isidlo semvulo seNeck
Thatha iipunipoyi ezi-2 zobisi olufudumeleyo, uhlaziye igramu ezili-10 zesilonda, wongeze ama-5 okanye ama-6 weeyusi ye-lemon kunye neqanda elinye. Ukuxininisa, sifaka umgubo omncinci we-rye okanye isitashi. I-mask isetyenziswe elukhunjini entanyeni kunye noqweqwe oluncinci. Imfuno imaski kakuhle kwaye inondla isikhumba somnxeba entanyeni. Umphumo omnandi wokuphucula nokuphucula uya kuba nemveliso yobisi elukhumbeni.
Oatmeal Neck Mask
Iipunipoli ezi-2 zomgubo oatyutywe kunye nobisi obisiweyo okanye nge-kefir, ukufumana ubuninzi be-ukhilimu omuncu. Makhe songeze i-parsley eluhlaza okanye i-plantain.
I-vitamin mask entanyeni
Ku luncedo ukwenza i-vitamin mask ebusika. Icandelo eliphambili le-mask yi-karoti, ixutywe kwi-grater efanelekileyo, inika isikhumba sentanyeni nge-vitamin A. Ukuze izaqathe zixutywe ngokupheleleyo, zixutywe kunye neoli yemifuno okanye ukhilimu omuncu. Ukuxininisa, faka umgquba omncinci okanye umgubo we-rye kwi-mask.
Natur kwikhukhamba elincinci, ubuncwane obuncinane, amaconsi ambalwa e juisi, i-oatmeal, udibanise nokuxinana okuxubileyo, esiwabeka entanyeni. Le maski inefuthe lokucoca kunye nokunyusa. Ukuba sithatha indawo yobusi ngeoli yeoli, siya kufumana imaski efanelekileyo kwesikhumba esiqhelekileyo nesomileyo entanyeni.
Kulungile ukusebenzisa i-decoction efriziwe yee-linden, amaqabunga e-birch, i-mint, i-parsley, i-chamomile. Kukho nawuphi na, isikhumba sakho siya kuzuza.
Ngoku siyazi ukuba ziphi iimaski ezenziwa entanyeni. Ukulandela ezi ndlela zokupheka, unokunyamekela ulusu lweentamo kwaye uhlale umhle iminyaka emininzi.
I-Eyebrow ukulungiswa kwi-salon yobuhle
Ukunyamekelwa kwebusika kwesikhumba esibuhlungu
Ukunyamekela emva komlomo emva kokumiswa ngonaphakade
Iingxaki ezincinane kunye nophando lweplastiki
Inkukhu igqitywe ehovini
Umbonisi omnandi wamaTV uLilia Rebrik
I-Compote yezithelo ezomileyo kunye nama-crranberries
Iidlophu zokutya ezidliwayo kunye nezingekho ngezinga eliphezulu
Ungayifaka njani umgca emgceni?
Siyazi kakuhle ubuchule bokusilalisa ummandla wee-collar
"Utsha olutsha-2015" lukhethe umntu ophumeleleyo
Ubugcisa bokupheka izitya zaseNtaliyane
Ibhotela le Buckwheat nge sipinashi kunye nesilili
Cutlets ezivela kwi-broccoli